Caadooyinka Kanada iyo ciidaha Kanadiyaanka, ma taqaanniin? | Safarka Absolut
Dhaqamada iyo ciidaha Kanada
Kanada waa waddan adduunka oo dhan looga yaqaan inuu yahay a dalka dhaqamada badan oo leh saameyn dhaqameed oo ballaaran oo si xoog leh u abuuraya kala duwanaanta caadooyinka iyo dhaqamada aaggan adduunka. Ku faanista haysashada aqoonsi gaar ah, Kanadiyaanka waxay ka dhex muuqdaan waddan kasta oo ay booqdaan, ma aha oo kaliya inay ku faanaan muwaadinimada waddanka labaad ee adduunka ugu weyn (marka loo eego wadarta aagga), laakiin sidoo kale caadooyinkeeda iyo ciidaha ay jiraan meel u ah qof walba. Ma ogtahay waxa ka Dhaqanka Kanada?
Xaqiiqdii haddii aan weydiinno qof ku nool dalkan, waa maxay qaybta ugu wanaagsan ee noqoshada Kanada, way ku adkaan doontaa iyaga inay la joogaan hal meel oo ka mid ah noloshooda. Kaliya ma wajahayno mid dad aad u saaxiibtinimo leh, laakiin aad looga warqabo dabeecadda oo aan lahayn fikrado ku habboon oo u abuuri kara meelo dad kala duwan, meel kasta oo ay ka soo jeedaan.
Bulshadan noocan ahi waxay dhaqankeeda ka dhigtay astaan ​​u ah dad kale oo badan markay abuureyso ciidaha dhaqamada kala duwan kuwaas oo noqday kulanka kumaan kun iyo kumanaan qof sanad walba. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay isbeddelada dhammaan dhaqammada aan ka heli karno dalkan, taasoo dadka oo dhan ka dhigtay inay dareemaan inay ka mid yihiin waddanka, iyadoon loo eegin meesha ay ku dhasheen.
1 Dhaqanka Kanada
1.1 Dhaqamada ugu caansan ee dadka ku nool Kanada
2 Ciidaha dhaqanka ee Kanada
2.1 Bandhigga Caalamiga ah "Midabada Celtic"
2.2 Dabaaldeg "Kaliya qosol" Montreal
2.3 Jazz Festival ee Montreal
2.4 Carnival Jiilaalka Quebec
2.5 Bandhiga Muusikada Edmonton Folk
2.7 "Symphony of Fire" oo ku taal magaalada Vancouver
3 Ciidaha kale ee Kanada
Dhaqanka Kanadiyaanka waxaa saameyn xoog leh ku leh guuleystayaasha kala duwan ee yimid dalalkooda: faransiis iyo british. Kuwii guuleystey waxay ku darsadeen saameynta dhaqammadooda dhaqamada asaliga ah ee dalka.
Iyada oo ay jiraan dad badan oo soo galooti ah, oo dhalashooyin kaladuwan leh, waxaa jira gobollo badan oo Kanada ah oo leh laqabsiyo kaladuwan oo jinsiyado kala duwan ah oo yimid oo dareemay jacayl badan waxay ku guuleysteen inay ugu yeeraan Kanada “gurigeyga”.
Natiijada isku darka dhaqammada, ayaa Kanada ka dhigtay waddan kala duwan oo leh dhaqammo kala duwan sidii waddan soo dhaweyn leh, oo ka mid noqday meelaha ugu wanaagsan ee laga haajiro dadka ka kala yimid dalal iyo dhaqamo kala duwan oo adduunka ah.
Dhaqamada ugu caansan ee dadka ku nool Kanada
Kabahaaga ku dhaaf albaabka guriga qof kasta oo aan booqanno ama gurigeenna oo aan dhex marno, sharaabaadyo ama noocyo kale oo kabo ah oo aan ka iman waddada.
Haddii nalagu casuumay casho ama munaasabad ka dhacda qof gurigiisa, waa inaan keennaa ubax, khamri tayo leh ama shukulaato, oo calaamad u ah mahadnaq iyo naxariis.
Markii aan wadahadal la sameyno qof, waa inaan isku dayno inaan qofka kale taabanno sida ugu yar ee suurtogalka ah, ixtiraamida booskooda shaqsiyeed sida calaamadda ixtiraamka.
Ciidaha dhaqanka ee Kanada
Kanada waa halka ay ku dhalatay dhowr xafladood oo waawayn oo looga raaxeysan karo qeybaha kala duwan ee dalka. Qaar ka mid ah ciidahan ayaa ah kuwa caan ku ah dadka soo booqda dalka iyo dadkiisa, waana sababta ay muhiim u tahay in la ogaado xafladaha waaweyn, iyo taariikhahooda, si loo qorsheeyo ajandaheena bulsho.
Waxaa jira xaflado badan oo in kasta oo lagu qabto Kanada, ay abuureen hab lagu qabto xaflado lagu dhaqan geliyey dalal iyo dhaqamo kale. Booqashada dhammaan xafladaha suuragalka ah ee dalkan ka dhacaya waxay maskaxdeena ka heli doontaa inaan aragno oo aan ku raaxeysano dhaqanka sidii hore. Haddii aan dooran lahayn xafladaha ay tahay inaad ku booqato Kanada, waa inaadan ka maqnaan mid ka mid ah kuwan soo socda:
Bandhigga Caalamiga ah "Midabada Celtic"
Waxaan wajaheynaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu caansan ee ka dhacaya Kanada. Dad badan, oo isugu jira kuwa maxalliga ah iyo kuwa soo booqda, ma doonayaan inay ka maqnaadaan ka qeyb galka ciidaan. Guud ahaan, waxay dhacdaa inta lagu jiro bisha Oktoobar sannad kasta, jasiiradda Cape breton muddo sagaal maalmood ah. Iyada oo loo marayo dhaqanka Celtic, waa xaflad aan ku baranayno dhaqankan sida ugu macquulsan Waqooyiga Ameerika.
Dabaaldeg "Kaliya qosol" Montreal
July kasta, ee Magaalada Montreal, xafladan ku saleysan majaajillada iyo hal-ku-dhegyada ayaa loo dabaaldegaa. Waa iid wanaagsan oo lala raaco qoyskeenna iyo asxaabteena si maalin dhan loogu baashaalo si ka duwan.
Jidadka magaaladan quruxda badan, waxaan ku raaxeysan karnaa dad kala duwan oo naga qosli doona had iyo jeer: hadday tahay kaftan, hadallo keli ah, sixir, iwm.
Jazz Festival ee Montreal
Hadaad raacsantahay Muusikada Jazz, xafladani waa taariikhda kuugu habboon ee geyiga Kanada. Inta lagu jiro bisha Luulyo, magaalada Montreal, xaflad ayaa lagu qabtaa in ka badan 3.000 oo muusikiistayaal jazz ah oo jinsiyado ka kala socda in ka badan 30 waddan oo kala duwan, oo keliya ku barokacay xafladdan. Waxaan ku raaxeysan karnaa labada riwaayadood ee bilaashka ah iyo riwaayadaha lacag bixinta ah ee hoollada kala duwan.
Carnival Jiilaalka Quebec
Waxaan wajaheynaa xaflad ka dhaceysa Magaalada Quebec ilaa 1955 si habsami leh xayawaankaaga. Soojiidashadeeda weyn ayaa ah bandhigeedyada habeen iyo maalin ee ay ka qaybgalaan xubnaha dadweynaha iyo maskaxdooda. Waxaan sidoo kale ka heli karnaa bandhigyo iyo waxqabadyo kala duwan magaalada oo dhan oo ka dhaca wabiga hoostiisa, maxaa yeelay waxay badanaa dhacaan dhamaadka Janaayo. Taasi waa sababta, tusaale ahaan, mid ka mid ah waxqabadyada haysta kuwa ugu taageerayaasha badan inta lagu jiro ciidaan waa tartamo baraf ah iyo doonnida barafka.
Bandhiga Muusikada Edmonton Folk
Waxaad ka heshay muusikada dadweynaha? Toddobaadkii labaad ee Ogosto magaalada Edmonton waxaad leedahay xaflad lagugu sugayo. Dhacdadani muusikada waxay socotaa afar maalmood oo ay la socdaan farshaxanno noocyo badan leh (folk, Celtic, injiil, iwm.), Kuwaas oo isku daraya waxqabadkooda inta udhaxeysa marxaladda ugu weyn iyo heerarka farshaxanno shaqsiyeed ama marxaladaha ay farshaxanno kala duwan si firfircoon uga wada shaqeeyaan.
Aroortii, waxaan ku raaxeysan karnaa aqoon-isweydaarsiyo kala duwan iyo riwaayado la xiriira noocyada kala duwan ee cuntada, farsamada gacanta, dukaamada CD-ga iyo badeecadaha laga helo farshaxanno kala duwan, iwm. Had iyo jeer waxay ka dhacdaa isla goobta, iyada oo in ka badan 12.000 oo baasabooreed dhammaad ah inta lagu gudajiray in ka badan 20 sano ay socotay.
Waxaa loo yaqaan "Bandhigga Bannaanka ee ugu Weyn Dunida”Waxaa lagu qabtay magaalada Calgary, qiyaastii bartamihii bishii Luulyo, muddo 10 maalmood ah, isagoo noqday mid ka mid ah ciidaha ugu dheer ee lagu qabto Kanada.
Inta lagu jiro xafladan waxaan ku raaxeysan karnaa roodeos-yada quraafaadka ah ee ku saabsan dibida iyo fardaha adduunka oo dhan laga yaqaan, dhadhamada kala duwan, riwaayadaha, soo jiidashada, tartamada gawaarida, iwm. Had iyo jeer waxay ka dhacdaa koonfur-bari magaalada Calgary, halkaas oo in ka badan 350.000 oo qof u yimaadaan oo ay si toos ah ugu raaxaystaan ​​iyo, iyadoo telefishanka loo sii daayo, laba milyan oo qof oo kale.
"Symphony of Fire" oo ku taal magaalada Vancouver
Haddaan booqano Magaalada Vancouver, waxaan heli doonnaa xaflad sanadle ah oo la sameeyo rashka dhowr maalmood. Waxay noqotay tartan caalami ah oo qaab “saaxiibtinimo” ah oo u dhexeeya qaybaha kala duwan ee adduunka, oo loogu dabaaldego sida in rashku u qarxo hab choreographed ah laxanka muusikada la doortay.
Waxaa la rumeysan yahay inuu yahay tartanka rashka adduunka ugu weyn ee dhaqan ahaan lagu qabto xagaa kasta magaalada Vancouver. Bandhig ay si aad ah u sugayaan dadka soo booqda iyo kuwa maxalliga ahba iyo, sannad kasta oo ka dambeeya, waxay kordhisaa caankeeda iyo tirada ka soo qayb galayaasha
Ciidaha kale ee Kanada
ka fasaxyada qaranka ee Kanada waa la xusaa: 1-da Janaayo waxay la mid tahay Maalinta Sannadka Cusub adduunka intiisa badan, Maajo 20 Maalinta Boqoradda Victoria. Jadwalka maalin aad muhiim u ah waa 1da Luulyo, Maalinta Qaranka Kanada. On September 1 ah Xisbiga shaqada, Oktoobar 14 waa Maalinta Thanksgiving iyo Nofeembar 1 ee Maalinta dhimashada. Kirismas 25-ka Diseembar maalinta ku xigtana waa la xusaa iidda San Esteban.
Maalinta koowaad ee sanadka ee Vancouver, waa la qabtay "Ku dabbaashanaya bahasha cad". Waxay ku dabaalataa 274 mitir heerkulka celcelis ahaan 6 digrii. Isla dabaaldeggii ka dhex dhacay boqorada Victoria Victoria dhacdo ayaa la qabtaa halkaas oo rashka la tuuro habeenkii oo dhan.
En Quebec, bisha Febraayo dabbaaldegyada ayaa dhacaya. Kow iyo toban maalmood ah magaalada waxaa ku buuxsamaya dad aadaya habeenki dhoolatusyada. Waxay ka qeybgalaan tartamada farshaxanka barafka, tartamada doonyaha ee ka dhaca Wabiga St. Lawrence, iyo tartamo kale oo badan oo la xiriira barafka. Sidoo kale bishii Febraayo laakiin Kanaalka Rideauin - Ottawa, adduunka ugu weyn, ee Jiilaalka. Kani waa riwaayad u dhaxeysa raacida buufin ilaa balet baraf.
Haddii waqtigaas aad ku dhowdahay Niagara Ha 'joojin booqasho la Carwo iyo Khamri Carwada ama Carwada Beeraha Royal Toronto.
Inta lagu jiro xilliga dayrta xaflad ayaa la qabtaa oo lagu xuso meelo badan oo meeraha ah: the Oktoobarfests. Magaalooyinku waxay u labbisan yihiin sidii magaalooyinkii duugga ahaa oo sheeko xariirooyinka degaanka ayaa meel walba laga maqlaa.
Haddii aad jeceshahay muusikada Vancouver laga bilaabo Juun 21 illaa 30 waxaa jira xaflad jazz ah oo sannadle ah iyo mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan adduunka ee Montreal laga bilaabo Juun 27 illaa 7 Luulyo, oo leh 1600 fannaaniin ka socda Kanada iyo bandhigyo 350 ah.
Fasaxyada dhammaan dhadhanka. Hadaad agjoogtid safarka ilaa Kanada hubi jadwalka inaad xaqiiqdii awood u yeelan doonto inaad kaqeyb gasho xaflad maxalli ah oo aad waxbadan ugabarato caadooyinka meeshan quruxda badan.
Sidaad aragtay, Kanada waxay leedahay kordhinteeda a kala duwan de pueblos y dhaqamada in dhawro dhawrsan badan oo ka mid ah caadooyinka y xafladaha. Caadooyinka Kanada oo dhan kee baa ku dheggan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dhaqamada iyo ciidaha Kanada
Kanada waa aabbahay laakiin ma tagi karo sababtoo ah ma haysto fiiso, sharciga Arizonana kuma xumayn karo laakiin adduunyada ayaa iska leh qof walba
runta canada waa qurux
Qurux ahaanta ka sokow, way qurux badan tahay badanaa soo dhoweynta iyo deeqsinimada dadkeeda, daryeelka deegaanka iyo mas'uuliyadda dawladda ee ah inay ilaaliso adeegyada aasaasiga u ah nolosha dadka.
Ku jawaab daniel ayala
waa wax qurux badan
Waa waxa ugufiican ee aanan waligey arag, waxay noqon laheyd bacano ka timid Colombia inaad ku dabaalato bahalada tiirarka kana baxo nolol maalmeedka una aado inaad ku baashaasho Kolombiya sidoo kale waxay leedahay qeybaheeda quruxda badan laakiin waxaan u baahanahay bears polar
wanaag u noqo wixii aan qoray
Ku jawaab sa
Waad salaaman tahay, magaceygu ​​waa Consuelo waxaana rabaa inaan ogaado Kanada maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay aad u qurux badan tahay, waxaan ka imid Kolombiya, waxaan ka jeclahay waddankan waa jawigiisa its. 🙂
Ka jawaab qalbi qaboojinta
Waan daneeyaa waxaad leedahay, tacsiyeyn
Waa salaaman tahay, qoraal aad u wanaagsan.
Waxaan rabay inaan ku weydiiyo: 1 Nofembar ma fasax baa Kanada? Hore ayaan u arkay in aysan kujirin USA, laakiin waxaan shaki iga qabaa inay tahay iyo inkale inay tahay maalin shaqo Kanada.
Patios de Córdoba, quruxda dhaqanka
Dagaalyahannada Terracotta, Sirtii ugu dambeysay ee ugu weyneyd Shiinaha